အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကစ္ဆပနဒီနဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့ ဆုံကြလေသောအခါ...
16 Responses to “ကစ္ဆပနဒီနဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့ ဆုံကြလေသောအခါ...”
အိုး.. လှလိုက်တာ... စိတ်လည်းအတော်ဝင်စားတယ်.. မချောအရင်က ဓါတ်ပုံတွေတင်ကတည်းက.. ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဲဒီဘက်ကို ရောက်ဖြစ်အောင်သွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးထားတယ်.. :D...
လှလိုက်တာ မချောရေ.. အခွင့်ရှိရင် သွားချင်သေးသပ.. :P
view point ငယ်ငယ်တုန်းက ရောက်ဖူးတယ်။ မြောက်ဦးကို ရောက်ဖူးချင်တာ။ :)
သွားချင်တယ် ama yel. I have nv been there. Envy u.
အမချော.....ဒီတစ်ခေါက်ခရီးထွက်ဖြစ်ရင်...အဲဒီဘက်တွေကို ရောက်ချင်တယ်..မချော ပုံတွေကြည့်ပီး..ပိုပီးသွားချင်လာတယ်...:))
view point ကိုတခါမှမရောက်ဖူးသေးပါဘူး
မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာတွေ
အများကြီး ကျန်သေးတယ်း((
မမချောရေ.. အစ်မရေးတဲ့ ကွန်မန့်က ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ.Spam ထဲရောက်နေတယ်.။ Not Spam လုပ်လိုက်တော့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး.။ အစ်မ မိုးငွေ့ ဘလော့မှာလည်းဖြစ်တယ် ပြောတယ်.။ ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး.။ တစ်ခုခုစစ်ကြည့်ပါလား.။
ရိုက်ချက်တွေကောင်းလိုက်တာ ချောရေ။ ကစ္ဆပနဒီမြစ်ဆိုတဲ့ ကုလားတန်မြစ်ကမ်းနဘေးကို အလည်တစ်ခေါက်လောက် သွားချင်လိုက်တား)
မချောကျေးဇူးကြောင့် ရောက်ဖူးချင်တဲ့နေရာတော်တော်များများ ရောက်ရတယ်နော်.။ လှပသာယာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ကို ရောက်သွားတာ..။
စောစောစီးစီး ကြည့်မိတာ စိတ်ကြည်နူးစရာ...
လင်းဆွဲတွေနဲ့ သစ်ပင်ကိုသဘောကျတယ်.. တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါး ထူးဆန်းတဲ့ပုံ ရခဲ့တာပဲ..။
သေချာ အားထုတ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေဆိုတာကတော့ ကိုယ်တွေ့မို့ ယုံတယ်.. :)
အစ်မလည်း ကိစ္စပေါင်းများစွာနဲ့ မအားတာ အခုမှ စာတွေ ပြန်လိုက် ဖတ်နေတယ် ချောရေ..။
မကြီးရေ ခုမှရောက်ရတော့တယ် ဘလော့ကိုပြန်ကပ်နိုင်ပြီလေး))
စစ်တွေကို တစ်ခေါက်တော့ရောက်အောင်သွားချင်သေးတယ် အဲဒီကမ်းခြေကိုငယ်ငယ်ကတည်းကသွားချင်ခဲ့တာ
မေလထုတ် lookမှာ အစ်မနဲ့ အတူ ထပ်ဆုံရပြန်ပြီးနော်
အစ်မရဲ့ ငရဲပန်းများအလယ် ကိုတော်တော် သဘောကျမိလို့
အစ်မနဲ့lookမှာဆုံအောင် ကြိုးစားခဲ့တာလေ...
(တခြားလူက အကြောင်းကြားလို့သိရတာ...